I-OnePlus 5 kunye ne-5T kungekudala ziya kufumana i-Android 9.0 Pie | I-Androidsis
El OnePlus 6T Yifowuni yokuqala yohlobo oluza kuqala lufakelwe nayo I-Android 9 Pie njengenkqubo yokusebenza. Umenzi waseTshayina ukhuphe uhlaziyo olusekwe kwi-OxygenOS 9.0 olusekwe kwiPie ye-OnePlus 6 ye-smartphone malunga neenyanga ezimbini ezidlulileyo. Ngoku iifowuni ze-OnePlus ezilandelayo zilinde emgceni zezi OnePlus 5 y OnePlus 5T.
Uhlaziyo lwePie lwe-Android lunokuza kwi-OnePlus 5 kunye neefowuni ze-5T kungekudalaNjengoko umenzi waseTshayina ekhuphe ingxelo evulekileyo ye-beta yenguqulo yamva nje ye-Android kwezi fowuni zise China.
Iifowuni ze-OnePlus ezithengiswe ngaphandle kwe China ziza ne-Oxygen OSNgelixa iifowuni zayo zaziswa e-China zibonisa iHydrogen OS. Umvelisi waseTshayina ukhuphe i-Android 9 Pie version evulekileyo ye-beta esekwe kwiHydrogen OS 9.0 yezi modeli.
Uhlaziyo olutsha luzisa ukuthinta okupheleleyo kwescreen kwi-OnePlus 5T. Eli nqaku alifumaneki kwi-OnePlus 5, njengoko le modeli ixhotyiswe ngamaqhosha omzimba angaphantsi kwescreen.
Ulawulo lwezicelo ezisebenza ngasemva zilungisiwe ukuze zinike amava agudileyo. Yintoni egqithisile, Abasebenzisi banokukhetha iSIM khadi emiselweyo yomfowunelwa othile okanye iqela elithile.
Kwinyanga ephelileyo, kwaxelwa ukuba uhlaziyo lwe-Android 9 Pie ye-OnePlus 5, i-OnePlus 5T, i-OnePlus 3 kunye ne-OnePlus 3T ii-smartphones zilibazisekile. Nangona kunjalo, I-Oxygen OS Android 9 Pie beta inokubakho kwezi fowuni kungekudala. Oku kunokuthetha ukuba abasebenzisi be-OnePlus 5 kunye ne-5T banokunyangwa kuhlobo oluzinzileyo lwesoftware yamva nje kokuphela konyaka.
Ngokubhekiselele kwiifowuni ze-OnePlus 3 kunye ne-3T, zombini iiterminal ziya kuba nakho ukufumana uhlelo oluzinzileyo lwenkqubo yokusebenza ye-Android 9 Pie kunyaka olandelayo, nangona ingaziwa ncam ukuba nini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iindaba ezimnandi: i-OnePlus 5 kunye ne-5T kungekudala ziya kufumana iPie ye-Android